admintriatra, auteur sur - Page 1220 sur 1851
04/10/2017 admintriatra 0
Araka ny tatitra sy ny salan’isa mazava navoakan’ny teo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamana omaly, dia fantatra fa olona 30 no matin’ny valanaretina pesta, manerana an’i Madagasikara. Raha ho an’ny hopitaly Ambohimiandra manokana izao, dia olona roa …Tohiny
Mandray andraikitra. Manoloana ny firongatry ny aretina Pesta amin’izao fotoana, dia nanentana fanadiovana tamin’ny asa tana-maro ny tanora HVM. Nisantarana izany ny teto Antananarivo ka fokontany iray isaka ny boriboritany no nanatanterahana ny hetsika fanadiovana. …Tohiny
Fanelezana tsaho momba ny pesta : Nahazo fahafahana vonjimaika ilay lehilahy 49 taona
Taorian’ny nanolorana azy teo anatrehan’ny fampanoavana omaly, dia fantatra fa nahazo fahafahana vonjimaika i RF, ilay rangahy 49 taona nanely tsaho momba ny pesta tany anaty tambazotran-tserasera “facebook”. Ny alatsinainy lasa teo ity lehilahy nanao …Tohiny
Seraseran’ny pesta : Lasa fanaratsiana fitondrana
Ny taona 1981 no efa nisy teto Madagasikara ny aretina pesta, ary isaka ny vaninandro tahaka izao, izany hoe fidirana amin’ny main-tany sy noho ny doro tanety dia miakatra hatrany ny voalavo, anton’ny fisian’ ny …Tohiny
« 1 … 1 218 1 219 1 220 1 221 1 222 … 1 851 »